Kooriyaan Kaabaa qoqqobbii mootummoota gamtoomani hordofuun Amerikaatti dhaadatte - BBC News Afaan Oromoo
Kooriyaan Kaabaa qoqqobbii mootummoota gamtoomani hordofuun Amerikaatti dhaadatte
13 Fuulbaana 2017
Kooriyaan Kaabaa boombii haaydiroojinii yaaluu beeksiste
Mootummoonni gamtoomani qoqqoobbii haaraa irra buuse hordofee Kooriyaan Kaabaa kan haga ammaa caalaa Amerikaa akka darartu sodaachiifte.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jiilli Piyongyaang Ameerikaan ''lola siyaasaa, diinagdeefi waraanaa barbaaddetti,'' jedhan.
Pireezidaantiin Amerikaa Donaald Tiraamp qoqqobbichi kan silaa ta'uu malu waliin yoo madaalamu baay'ee xiqqoodha jedhan.
Qoqqobbiin mootummoota gamtoomani biyyattiin rakkoo boba'aan akka rakkattuufi sagantaa waraanaaf galii akka hin arganne dhorkuufi.
Tarkaanfiin dhiyeenyaa Kooriyaa Kaabaa boba'aa dhorkuufi huccuu akka biyya alaatti hin gurgurre kan dhorku yoo ta'u, yaalii niwukileeraa jahaaffaafi isa guddicha hordofe murtii darbe dha.
Mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Kooriyaa Han Taye Song biyyi isaanii 'wixinee seera hin hordofne' hin fudhattu jedhan.
''Tarkaanfiin Kooriyaa Kaabaa dhufaa jiru inumaa kan kanaan dura Amerikaan dararamte kan caalu ta'a,'' jechuun yaa'ii mootummoota gamtoomani Jeeneevaatti ta'ameerraati dubbataniiru.
Taa'ani mari'atani waan sirrii murteessuurra Waashingtan waanuma dhimma niwukileraa keenyaan qabamteef murteessites jedhaniiru.
Qoqoobbiin kuni erga Raashiyaa fi Chaayinaan yaada Amerikaan dhiyeessite foyyeessani booda sagalee guutuun murtaa'e.
Manni maree nageenyaa Amerikaan keessa jirtu irra-deddeebbiin Kooriyaa kaabaarratti qoqqbbii buuse
Yaadi Amerikaa mootummaan Kooriyaa Kaabaa haadhuma isaa boba'aa akka hin galchine kan dhorku ture. Kunimmoo xinxaltoonni siyaasaa muraasni akka jedhanitti mootummicha haalaan gaaga'a.
Qoqqobbiin mootummoota gamtoomanin murtaa'e lammiileen Kooriyaa Kaabaa biyya alaa hojjetan Viisaa akka hin arganne kan dhorkus dabalata.
Ameerikaan akka tilmaamtetti waggaatti haga doolaara miiliyoona 500 isaan dhabsiisa.
Yaadi bulchaan biyyatti Kim Jong Un akka biyyaa biyyatti hin adeemne dhorkuufi qabeenya isaanii biyya alaa jiru akka hin fayyadamne dhorku osoo hin murtaa'in hafe.
Murtee Kibxataarratti yaada isaanii kan kennan Donaald Tiraamp waan guddaa miti jedhan.
''Dhiibbaa qabaachuu isaa nan shakka garuu homarraa sagalee 15 argachuutu wayya. Qoqqobbiin kuni isa dhufaa jiruun yeroo wal bira qabamu baay'ee xiqqaadhas jedhan.
Mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Amerikaa Niki Haley mana maree nageenyaatti akka jedhanitti, ''Mootummaan Kooriyaa Kaabaa homaa ofirra deebi'aa hin jiru. Yoo adeemsa isaanii badaa kanaan itti fufan, nutis dhiibbaa keenya cimsina. Filannoon kan isaaniiti.''
Wixineen seeraa wiixata, mootummoonni gamtoomanii murteessan erga bara 2006 as yeroo saglaaffaaf murtee sagalee guutuun darbedha.
Qoqqobbiiwwan duraani maal fidan?
Sadaasa 30, 2016: Mootummoonni gamtoomanii daldala cilee Kooriyaan Kaabaa Chaayinaa waliin qabdu dhorke. Al-ergiin biyyattii dhibbentaa 60'n hir'ate.
Ergasi maaltu ta'e? : Caamsa 14, 2017 Kooriyaan Kaabaa rokeetii baalestikii haaraa niwukileera baachuu danda'a jette yaalte.
Waxabajjii 02, 2017 : Mootummoonni gamtoomani imalli qondaaltota biyyattii 14 akka dhaabatu akkasumas qabeenyi dhaabbilee 4 akka hin sochoone taasise.
Ergasi maaltu ta'e? : Adoolessa 04, 2017 Kooriyaan Kaabaa misaa'ela baalestiikii idil-addunyaa yeroo duraaf milkaa'inaan yaaluu isii beeksiste.
Hagayya 06: Mootummonnii gamtoomani cilee fi albuudawwan kaan biyya alaatti akka hin daldalle dhorkuun doolaara biiliyoona tokko, galii daldala alaarra argattu harka sadii keessaa tokko akka dhabdu taasise.
Ergasi maal ta'e? Fulbaana 03, Kooriyaan Kaabaa boombii haayidiroojinii misaa'ela lafa dheeraa deemuu danda'u yaaluu isii beeksiste.
Ministirri dhimma alaa Chaayinaa Kibxata darbe akka beeksisetti, ''Kooriyaan Kaabaa sagalee mormii addunyaa dhagahuu dhabuun yaalii niwukileeraa taasiste. Kuni seerawwan manni maree nageenyaa dabarse kabajuu dhabuudha.''
Dabalataanis, waraanarra mariin fala akka argatu dhaamaniiru. ''Chaayinaan nannoon sun waraanaafi wal dhabdeetti akka galu hin eeyyamtu'' jedhan.
Gulaalaan BBC Chaayinaa Kaari Garsi akka jedhutti Chaayinaan mootummaa Kooriyaa Kaabaa irratti gammachuu dhabde qoqqobbiin cimaan ibsuu barbaaddi.
Dabalataanis, isa Amerikaan Chaayinaa himattu jalaa bahuudhaaf kana feetus, qoqqobbiin dhiyeenyaa mootummaa Piyongyaang kan gaaga'u miti.
Mootummaan Eertiraa namoota sababa amantaasaaniin hidhaman 30 ol wabiin gadhiise
Biraazil siidaa Kiristoos dheerinaan addunyaarratti sadaffaa ta'e ijaaraa jirti
'Son Heung-min osoo ilmakoo ta'ee midhaan hin kennuuf'-Leenjisaa Man Yunaayitid
Iraan buufatni misooma niwukilaraa ijoon jalaa haleelamuu himte
Loltuun gurraachi US 'akka hin malletti to'atame' poolisoota adii himate
Shonkee—Mandara waggoota 900f gaara gubbaarraa mul'attu
Qe'ee hojiin 'hojii dhiiraaf dubartiiti' hin jedhamne
Yeroo dhuma kan haaromfame: 1 Bitooteessa 2019